EcoCruise – Eco Cruise Oil
Motor Oil for4Cycle Gasoline and Diesel Engine
Motor Oil that lasts longer with
Motor Oil that lasts longer with your vehicle
Eco Cruise အင်ဂျင်ဝိုင်
ဂပြနျ နညျးပညာ အသုံးပွုထားသော အမွငျ မား ဆုံး စှမျးဆောငျရညျ ရှိခွငျး
IBB ကုမ်ပဏီလီမိတကျ မှ ထုတျလုပျသော Eco Cruise အငျဂငျြ ဝိုငျ သညျ သာလှနျ သော ဓါတျ ခှဲ စမျးသပျ မှု့ မြား, နောကျဆုံးပျေါနညျးပညာမြား နှငျ့ ဂပြနျနိုငျငံတှငျ ထုတျလုပျ ထား သညျ့ အတှကျ စှမျးဆောငျရညျကို အထိရောကျဆုံး ဖနျတီး ထားပါသညျ. Eco Cruise အငျဂငျြ ဝိုငျ ကို အသုံးပွုခွငျး အား ဖွငျ့ မွငျး ကောငျရေ အား ထိနျးသိမျး နိုငျစှမျး, ပုံမှနျထကျ သာလှနျ သော ညဈညမျး မှု့ ဒါဏျ ခံနိုငျရညျ, အငျဂငျြ အပူခြိနျ မွငျ့ မား သော ဒါဏျ ခံ နိုငျ မှု့ အစရှိသော အငျဂငျြ ထိနျးသိမျး နိုငျ မှု့ ကို သငျကိုယျတိုငျ သိရှိခံစား နိုငျ ပါ လိမျ့ မညျ.
ကား အငျဂငျြ ၏ သနျ့ ရှငျး မှု့ ကို ကွာရှညျစှာ ထိနျးသိမျး နိုငျခွငျး
သာမနျ အငျဂငျြ ဝိုငျ မြား ဟာ ညဈညမျး စသေော အရာမြား ပါဝငျပွီး လောငျကြှမျး နေ ခြိနျတှငျ အငျဂငျြကို ကြှမျး လောငျ ညဈ ပတျ ပေ ရေ စေ နိုငျပါသညျ. ဓါတု နညျး ဖွငျ့ သနျ့ စငျ ထားသော Eco Cruise အငျဂငျြ ဝိုငျ ကို အရေးတယူ အသုံးပွုခွငျး ဖွငျ့ သငျ့ ကား အငျဂငျြကို သနျ့ ရှငျး စေ နိုငျပါသညျ. သနျ့ စငျ သော အငျဂငျြ ဖွငျ့ မောငျးနှငျ ခွငျး အား ဖွငျ့ ပို မှနျ ကောငျးမှနျသော စှမျးဆောငျရညျ နှငျ့ တုံ့ပွနျ မှု့ ကို ရ ရှိနိုငျ ပါ လိမျ့ မညျ.
ထုတ်ကုန် / စေးကပ်မှု့ : Eco Cruise / 5W-30
အမျိုးအစား : SN/CF (ဓါတ်ဆီ နှင့် ဒီဇယ် အင်ဂျင်အတွက်)
ချောဆီအမျိုးအစား : ဓါတုဗေဒနည်းအရသန့်စင်ထားသောအင်ဂျင်ဝိုင်
5W-30 သည် သာမန်စေးကပ်မှု့ရှိပြီး မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူများမှ (ခရီးသည်တင်၊ SUV၊ လုပ်ငန်းသုံး) ယာဉ်များအတွက် ထောက်ခံချက်နှင့်အတူ မြင့်မားသောအင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိနိုင်ပါမည်။ Eco Cruise 5W-30 သည် ဘက်စုံသုံးအင်ဂျင်ဝိုင်အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ထားပါသည်။
ထုတ်ကုန် / စေးကပ်မှု့ : Eco Cruise / 10W-30
10W-30 သည် အင်ဂျင်သန့်စင်စွမ်းအားနှင့် ကာကွယ်နိုင်စွမ်းသာလွန်ပြီး (ခရီးသည်တင်၊ SUV၊ လုပ်ငန်းသုံး) ယာဉ်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အမျိုးမျိုးသောမော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်းများ(မြို့တွင်း၊ခရီးဝေး)အတွက်သင့်တော်ပါသည်။ Eco Cruise 10W-30 သည် ဘက်စုံသုံးအင်ဂျင်ဝိုင်အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ထားပါသည်။
ထုတ်ကုန် / စေးကပ်မှု့ : Eco Cruise / 10W-40
10w-40 သည် ခရီးဝေးသွားရန်အတွက်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ သမာရိုးကျ အင်ဂျင်ဝိုင်များထက် ယခုအင်ဂျင်ဝိုင်သည် အင်ဂျင်လည်ပတ်မှု့ မြင်မားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆီယိုဖိတ်မှု့အခြေအနေဆိုးရွားမှု့ကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ခြင်းအားကာကွယ်ဟန့်တားပြီး အဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်အင်ဂျင်ကိုလည်ပတ်စေပါသည်။ ယခုအင်ဂျင်ဝိုင်၏စေးကပ်မှု့သည်မြင့်မားပြီး မောင်းနှင်နေစဉ်အတွင်စက်သံဆူညံမှု့များကိုလျော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
ထုတ်ကုန် / စေးကပ်မှု့ : Eco Cruise / 15W-40
အမျိုးအစား : CI-4 (ဒီဇယ် အင်ဂျင်အတွက်သာ)
15W-40 သည် လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များ နှင့် စက်ယန္တရားများ၊ SUV အမျိုးအစားယာဉ်များ တွင်အသုံးပြုရန်အတွက် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ အပူချိန်မြင့်မားခြင်း၊ အချိန်ကြာကြာ မောင်းနှင်မှုများကြောင့် အင်ဂျင်ဝိုင်လျော့နည်းခြင်းများ မရှိစေရန် အင်ဂျင်ဝိုင်စေးကပ်မှုများအား မြင့်မားသောနည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ အင်ဂျင်အတွင်းရှိ အမှုန်အညစ်အကြေးများသာမက ရွှံ့ / နွံ များကိုပါ သန့်စင်ပေးပြီး အပူချိန်မြင့်မားမှုများကို လျော့ချပေးပါသည်။
・ပမာဏ / ထုတ်ပိုးမှု :
ယခုဆိုလျှင် အီကိုခရုစ်အင်ဂျင်ဝိုင်ကို ၁လီတာအိတ်ပုံထုတ်ပိုးမှုဖြင့် ရရှိနေပါပြီဖြစ်ပါသည်။၎င်းအိတ်များအား စွန့်ပစ်ရန်လွယ်ကူသည့်အတွက် သင့်အနေနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ကူညီရာလည်းရောက်ပါသည်။ အီကိုခရုစ်အင်ဂျင်ဝိုင်အိတ်ကို ထုတ်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်တွင် ပုံစံ၊ စွမ်းရည် နှင့် အကြမ်းခံနိုင်မှုတို့ကို ဂျပန်နိုင်ငံမှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် လေ့လာထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ 5W-30 ၏ထုတ်ကုန်အချက်အလက်များကို ရွေးချယ်ကြည့်ရှုပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ 10W-30 ၏ထုတ်ကုန်အချက်အလက်များကို ရွေးချယ်ကြည့်ရှုပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ 10W-40 ၏ထုတ်ကုန်အချက်အလက်မျာကို ရွေးချယ်ကြည့်ရှုပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ 15W-40 ၏ထုတ်ကုန်အချက်အလက်မျာကို ရွေးချယ်ကြည့်ရှုပါ။
Eco Cruise အင်ဂျင်ဝိုင်အားဝယ်ယူရန်
အင်ဂျင်ဝိုင်ထုတ်ယူရာတွင်အင်ဂျင်အေးမှသာထုတ်ယူသင့်ပြီး အင်ဂျင်ပူနေစဉ်ထုတ်ယူပါက အပူလောင်ခြင်းကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။
လက်အိတ်ဝတ်ဆင်ပြီး မျက်နှာနှင့်မျက်လုံးအတွက် အ၀တ်အကာအကွယ်များကာကွယ်ခြင်းများပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းတွင် အစာစားခြင်းရေသောက်သုံးခြင်းနှင့် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို လုံးဝမပြုလုပ်သင့်ပါ။
နေရောင်ခြည်ဖြင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှု့ကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်း၊ လေ၀င်လေထွက်ကောင်းပြီးအေးမြသောနေရာတွင်ထားရှိရပါမည်။ အင်ဂျင်ဝိုင်ဗူးကိုဖောက်ပြီးလျှင်အဖုံးကိုတင်ကျပ်စွာပိတ်ပါ။
Eco Cruise အင်ဂျင်ဝိုင်ကို ရေနံဆီမှတဆင့်သန့်စင်ထုတ်ယူထားပြီးဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ်ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ရေနံဆီကိုအခြေခံထားသော ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအနည်းဆုံး၁၀မျိုးခန့်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ အခြားသောအင်ဂျင်ဝိုင်တစ်ခုများနှင့် ကွာခြားချက်အဖြစ်ထုတ်ကုန်အချောထွက်လာသည်အထိ ပါဝင်ပစ္စည်း၂၅မျိုးထက်ပိုမိုအသုံးပြုထားပါသည်။
IBB ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော Eco Cruise အင်ဂျင်ဝိုင်ကို ရောစပ်ရာတွင် ရေနံဆီအခြေခံ နှင့် ကမ္ဘာ့ပြိုင်ဘက်ကင်းနည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်သောကုမ္ပဏီ၃ခုတွင်၁ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သော ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သောဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများနှင့်ရောစပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ရောစပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်ဝိုင်ကို ဂျပန်နိုင်ငံထုတ်မော်တော်ယာဉ်များတွင်သာမက ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိအခြားနိုင်ငံထုတ်မော်တော်ယာဉ်များတွင်ပါ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မြင့်မားသောအရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းရန်အတွက် ရောစပ်မှု့ပြီးဆုံးပြီးထွက်ရှိလာသော အင်ဂျင်ဝိုင်နမူနာကို စမ်းသပ်ပြီး အဆိုပါကျပ်မတ်ထားသော အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများထက်သာလွန်ကောင်းမွန်သောအင်ဂျင်ဝိုင်မှသာလျှင်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။
4. ဖွညျ့စှကျခွငျးလုပျငနျးစဉျ ၄လီတ
IBB ကုမ်ပဏီမှ ထုတျလုပျသော Eco Cruise အငျဂငျြ ဝိုငျ သညျ JIS (ဂပြနျ စကျမှု့ လုပျငနျးဆိုငျရာ စံခြိနျ စံ ညှနျး အဖှဲ့) အသိအမှတျပွု သံ ဘူး မြား ဖွငျ့ ထညျ့ သှငျး ထုတျလုပျ ထားပါသညျ. အသုံးပွုသူမြားအတှကျ ရငျးနှီး လှယျတဲ့ ပုံ ပနျး သဏ်ဍနျ ရှိသော ဘူး မြား နှငျ့ ထညျ့ သှငျး ထားသော ကွောငျ့ ကမ်ဘာတဈဝနျးမှ အ သိမှတျ ပွုခွငျး ခံထား ရပါသညျ. ယငျး ဘူး မြားသညျ အငျဂငျြ ဝိုငျ မြား ပကျြစီးခွငျး ကိုလညျး ကာကှယျ ပေးပါသညျ. ကုနျ ခြောမြား ကို နောကျဆုံးအနနေဲ့ ထုတျ ပိုး မှု့ ခြို့ယှငျးခကျြ မြားကို ကွညျ့ ရှု့ စဈဆေးပွီး မှ စက်ကူ သတ်ေတာ မြား ထဲသို့ ထုတျ ပိုး ပါသညျ.
5. ၁လီတာအိတ် တွင် ဖြည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
6. ထောက်ပံ့ ပို့ဆောင်ရေး
ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံသည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏အဓိကပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းများထဲမှ တစ်ခုအနီးတွင်တည်ရှိပြီး ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသွားမည့်ကုမ္ပဏီသည် ဓါတုပစ္စည်းများနှင့် ချောဆီများအတွက်ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်များဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာထုတ်ကုန်ကို ဦးတည်ရာသို့ လုံခြုံစိတ်ချစွာရောက်ရှိမည့်သေချာပေါက်အချက်ပင်ဖြစ်သည်။
" ကျွန်တော်ကားကိုအမြဲတမ်း အီကိုခရုစ်အင်ဂျင်ဝိုင်ပဲသုံးပါတယ်။ ဆွဲအားကအရမ်းကိုညက်ညောပြီး ဆီစားကအရမ်းကိုသက်သာပါတယ်။ တခြားအမျိုးအစားတွေထက်ကိုသဘောကျ နှစ်ခြိုက်မိပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်းဝယ်ယူသုံးစွဲသွားဦးမှာပါ။ " (ရွှေပြည်သာမြို့နယ်)
" ကျွန်မကတော့ အီကိုခရုစ်အင်ဂျင်ဝိုင်ကိုအမြဲသုံးစွဲနေတဲ့သုံးစွဲသူတစ်ဦးပါ။ ကျွန်မ၀ယ်ယူတာ၃ကြိမ်မြောက်ရှိပါပြီ။ ဒီအင်ဂျင်ဝိုက်ငပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒီအင်ဂျင်ဝိုင်ရဲ့ အရည်အသွေးကောင်းလို့ ကျွန်မကားရဲ့အခြေအနေလည်းကောင်းလာခဲ့တယ်။ နောက်ကိုလဲဝယ်သုံးဦးမှာပါ။ " (ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်)
" ကျွန်တော်ဆီဖောက်သည်အားလုံးကို အီကိုခရုစ်အင်ဂျင်ဝိုင်သုံးဖို့အမြဲထောက်ခံပေးတယ်ဗျ။ ဂျပန်နိုင်ငံထုတ် အရည်အသွေးမြင့်မားတယ်လေ။ အင်ဂျင်ကို ဒုက္ခမပေးဘူး။ အင်ဂျင်မီးပေးစွမ်းရည်နဲ့ ဆီစားနှုန်းငြိမ်လာမယ်။ အီကိုခရုစ်အင်ဂျင်ဝိုင်မသုံးခင်နဲ့သုံးပြီးကွာခြားလာတ့ ကားရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို ခံစားမိလိမ့်မယ်ဗျ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်ဖောက်သည်တွေကို ဒီအင်ဂျင်ဝိုင်သုံးဖို့ ယုံကြည်မှု့အပြည့်အ၀နဲ့ထောက်ခံပါတယ်။ " (အင်းစိန်မြို့နယ်)
" အီကိုခရုစ်အင်ဂျင်ဝိုင်သုံးပြီးနောက်ပိုင်း ကျွန်မဖောက်သည်ကားတွေရဲ့အင်ဂျင်ပိုင်းတွေငြိမ်လာပြီး အာပီအမ်ကလည်းပိုပြီး ချောမွေ့လာတယ်။ ဒီရလဒ်ကို ဖောက်သည်တွေအားလုံးက ကျေနပ်နေကြတယ်လေ။ ရံဖန်ရံခါ ကျွန်မကားကိုလည်း ဒီအင်ဂျင်ဝိုင်သုံးကြည့်ပါတယ်။ အံသြစရာကောင်းတယ်၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတယ်၊ ယုံယုံကြည်ကြည်သုံးစွဲဖို့ အာမခံနိုင်ပါတယ်ရှင့် " (သန်လျင်မြို့နယ်)
IBB Co., Ltd
1F, 4-3-18, Akebono-Cho, Fukuyama-Shi, Hiroshima-Ken, JAPAN 721-0952
TEL / +81-84-959-5428 (main)
TEL / +81-84-966 -8555
MUBIC Co., Ltd. No.80
, Ground Floor, Insein Street, ZayGyi East Ward, Kyi-Myin-Dine Township, Yangon, MYANMAR
TEL / +95-9455408881
Please choose from listInquiry for Purchasing Engine Oil (Individual customer)Inquiry for Distributor Engine Oil (Corporate customer)Comments about our productsEmployment with usOthers
မိတ်ဆွေတို့အနေနှင့်သိရှိလိုသည့်အချက်အလက်များကို စုံစမ်းမေးမြန်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏မြန်မာရုံးခွဲမှ
1F, 4-3-18, Akebono-Cho, Fukuyama-Shi,
Hiroshima-Ken, JAPAN 721-0952
Working hours / 9:00 ～18:00 (UTC+9hrs) (Excluding weekends and Japan public holidays)
IBB Co., Ltd 1F, 4-3-18, Akebono-Cho, Fukuyama-Shi, Hiroshima-Ken, JAPAN 721-0952
Takashi KOBAYASHI + 81-84-959-5428
July 3rd, 2013 +81-84-959-5427
Automobile sales, rental and leasing.
Automobile maintenance and inspection.
Sales of automobile supplies and accessories.
Dismantling of automobile and recycle parts sales.
Sales of automobile lubricants.
Bingo Bankin Co., Ltd.
IBB Myanmar Co., Ltd.
IBB ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် အရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ပါနည်းဥပဒေများဖြင့်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လိုအပ်သောအခြေခံမူဝါဒကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး တိုးတက်မှု့ရှိအောင်ကြိုးစားပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုရယူခြင်းမှာ သင့်တင့်မျှတပြီးတရာများမျှတအောင်လုပ်ဆောင်ထားပါသည်။ အသုံးပြုသူ၏ ရည်ရွယ်ချက်များပြင်ပတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုရယူသုံးစွဲဖို့ဖြစ်လာသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုအနေနှင့် တစ်ဦးချင်းစီမှကျွန်ုပ်တို့ နှင့်ကြိုတင်သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရယူရလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရာတွင် အသိပေးဖော်ပြထားသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအတိုင်းအသုံးပြုပါလိမ့်မည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်အသုံးပြုရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လျော်သောစီမံခန့်ခွဲသူများကိုရွေးချယ်ပြီး လျှို့ဝှက်စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် ညွှန်ကြားချက်များပေးစေလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မိတ်ဆွေတို့၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်မရရှိပဲ နောက်ထပ်အဖွဲ့အစည်းများသို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပေးအပ်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု့ကိုကာကွယ်တားဆီးခြင်း၊ မမှန်မကန်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ယိုစိမ့်ပေါက်ကြားခြင်းများကိုလိုအပ်အစီအမံများရယူခြင်း နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ကိုသင့်လျော်စွာစီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတောင်းဆိုချက်အရ အတည်ပြုပြီးနောက် ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ပြုပြင်ခြင်း နှင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်းများကို သင့်လျော်စွာတုံ့ပြန်ပါမည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သောစီမံခန့်ခွဲမှု့လက်အောက်၏ တာဝန်အရ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လျော်သောကြီးကြပ်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ညွှန်ကြားရေးမှုးများနှင့်ဝန်ထမ်းများ၏ အသိပညာများကိုအကောင်အထည်ရန် အတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်ထိန်းသိမ်းရန်မန်နေဂျာအဖြစ်ခန့်အပ်ထားရှိထားပါသည်။
© IBB Co., Ltd. All Rights Reserved.